के तपाईको खुट्टा धेरै गनायो ? यसो गर्नुहोस खुट्टा गनाउने समस्या चट « Sajha Page
के तपाईको खुट्टा धेरै गनायो ? यसो गर्नुहोस खुट्टा गनाउने समस्या चट
एजेन्सी । मानिसहरुले फरमल लुगा लगाउनु पर्ने हुनाले जुत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । खुट्टाको दुर्गन्धले मानिसलाई समस्यामा पर्ने गर्दछ । अझ नियमित सफाइ भएन भने त त्यो समस्या अझै बढ्छ ।
हाम्रो शरीरमा २ प्रकारका पसिना ग्रन्थिहरू हुन्छन्ः
एपोक्राइन ग्रन्थि (Apocrine Glands) र एक्राइन ग्रन्थि (Eccrine Glands)। एपोक्राइन ग्रन्थिहरू कपाल अथवा रौँहरू भएको ठाउँमा हुन्छन्, जस्तै; टाउको, काखि, गुप्ताङ्ग। तर, यस्ता ठाउँहरूबाट निस्कने पसिना (पहेँलो रङ्गको बाकुलो तरल पदार्थ) हाम्रो दिमागमा भएको तनावको कारणले निस्कने गर्दछ। जब त्यो पसिनालाई हाम्रो शरीरमा भएका ब्याक्टेरियाहरूले पचाउँदछ, तब शरीरबाट दुर्गन्ध निस्कने गर्दछ।
खुट्टाकाे दुर्गन्धलाई हटाउने घरेलु उपायहरु यस्ता छन्:
भिनेगरको मिश्रण: ब्याक्टेरियालाई पुर्णरूपमै सखाप बनाउन खुट्टालाई भिनेगरले धुने। यसले ब्याक्टेरियामा भोकमरी फैलाउने काम गर्दछ। एउटा भाँडामा मनतातो पानी र त्यसमा पानीको आधा भागजति भिनेगर मिश्रणमा ३० मिनेटसम्म आफ्नो खुट्टा डुबाउनुहोस् र यो १ हप्तासम्म गर्नुभयो भने खुट्टाबाट दुर्गन्ध हट्नेछ।
चिया: कालो चियामा हुने रसायनले हाम्रो पाइतालामा हुने साना साना प्वालहरूलाई टाल्ने काम गर्दछ, जसले गर्दा त्यहाँ ब्याक्टेरियाहरू बस्न पाउँदैनन्। यसले प्राकृतिक एन्टिबायोटिकको काम पनि गर्दछ। यसको लागि, १ कप पानीमा २ चम्चा कालो चिया राख्नुहोस् र १० मिनेटसम्म उमाल्नुहोस्। त्यस चियालाई मनतातो गराउनको लागि थोरै चिसो पानी मिसाउनुहोस् र त्यसले खुट्टा धुनुहोस्।